တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး H.E Mr.Huang Kunming ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို (MIR) ?? - Yangon Media Group
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး H.E Mr.Huang Kunming ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို (MIR) ??
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလေ့လာသည့်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး H.E Mr.Huang Kunming သည် ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို (MIR) သို့လာရောက်၍ နှစ်နိုင်ငံမီဒီယာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတရုတ်နိုင်ငံပါတီ Political Bureau အဖွဲ့ဝင်၊ ပါတီအတွင်းရေးမှူး၊ ပါတီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး H.E Mr.Huang Kunming သည် ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီး ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန်လျန်နှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သော ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို (MIR) သို့သွားရောက်ခဲ့ရာ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော် ဝင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင် အရာရှိကြီးများကကြိုဆိုကြပြီး နှစ်နိုင်ငံမီဒီယာပူးပေါင်းရေးကဏ္ဍများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ရွှေသံလွင်မီဒီယာကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်)က ”တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြန်ကြားရေးပိုင်းမှာ အဆင့်မြင့်တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို Myanmar International Radio ကို သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုလေ့လာချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလိုလာရောက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ယခုလိုမြန်မာနိုင်ငံသို့လာ ရောက်ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်တွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုတိုးတက်လာပြီး မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရသည်။ ”ဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်သံမီဒီယာတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာ သိချင်လို့လာ ရောက်လေ့လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေကိုပြသနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အပြီးမှာ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတွေကိုပိုပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ”ဟု ဦးကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်)က ဆက်လက်ပြောသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော မီဒီယာလုပ်ငန်းများအကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံမီဒီယာများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့် ရှေ့ဆက်၍လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်း ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံ မီဒီယာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး လမ်းညွှန်ခဲ့သည်။
ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက ရခိုင်ကိစ္စနှင့်ပတ် သက်၍ တရုတ်မီဒီယာများက သတင်းမှန်များထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးက ရှေ့ဆက်၍ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအနေဖြင့် တရုတ်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကို ပိုမိုအား ပေးသောအရာများကိုထုတ်လွှင့် စေလိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရွှေသံလွင်မီဒီယာ ဝင်းအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး စတူဒီယိုများတွင်ရိုက်ကူးနေသည် များကိုလေ့လာခြင်း၊ ခင်းကျင်း ပြသထားသော မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး ဆောင်ရွက်ထားပုံမှတ်တမ်းများကိုလေ့လာခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတကာရေဒီယို (MIR) သို့သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ရေဒီယိုအသံလှိုင်းများထုတ်လွှင့် နေမှုများကိုလေ့လာခဲ့ကြောင်းနှင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ရွေးကောက်ပွဲ သြဂုတ် လလယ်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည်
တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲ စစ်တပ်အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းခံရမှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပ
”ဆင်ဆာဖြတ်လာရင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က သက်သေ အထောက်အထားနဲ့ ပြနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားမယ်” ကျေ??
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များ မောင်တောရှိ ပြန်လည်လက်ခံ?